Orinasa Ambatovy : efa miverina miasa ny mpiasa | NewsMada
Orinasa Ambatovy : efa miverina miasa ny mpiasa
Hisy vokatra nikela indray amin’ny tapaky ny volana marsa ho avy izao, raha tsy misy ny fiovana. Tombanan’ny orinasa Ambatovy hahatratra 3.000 taonina ny vokatra ato anatin’ny telo volana voalohany.
Nitsidika ny toeram-pitrandrahana nikela sy kobalta any Amba­tovy Moramanga sy ny ozi­nina fanodinana any Toama­sina ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika, Ravo­katra Fidiniavo, ny alakamisy sy zoma teo. Nojerena ny fiomanan’ny orinasa Tetikasa Ambatovy ny fiverenana misokatra indray, taorian’ny fihibohana noho ny Covid-19. Hi­tany ny fitaovana sy ny fanajan’ ny mpiasa ny fepetra ara-pa­ha­salamana, izay tomombana tokoa. Hanamora ny fiverenan’ ireo tera-tany vahiny miasa ao amin’Ambatovy koa ny fanjakana. Nilaza ny tompon’an­drai­kitr’Ambatovy iray fa mety ho any amin’ny tapaky ny volana marsa vao tena hisy ny vokatra nikela. Tombanana ho 3.000 taonina ny nikela ho vokatra ao anatin’ny telo volana voalohany ho avy.
Hiverina tsikelikely koa, noho izany, ny fiaraha-mia­san’ity orinasa goavana ity amin’ireo orinasa mpiara-miombon’antoka aminy, toy ny mpamatsy akora eto an-toe­rana, kojakoja, vokatry ny fambolena, ilain’ny orinasa. Any amin’ny faritra Atsina­nana sy Alaotra Mangoro ny ankamaroan’izy ireny, an-tanàn-dehibe sy ambanivo­hitra.
Ho tombanana ny zava-bitan’ny kaominina
Nihaona tamin’ireo ben’ ny Tanàna amin’ny kaominina misitraka ny tamberim-bidy omen’Ambatovy koa ny minisitra Ravokatra Fidiniavo. Nandray izany tombontsoa izany ireo kaominina manamorona ny fitrandrahana sy ny fantsom-by mankany Toama­sina, nanomboka ny oktobra 2012. Tombanana ankehitriny ny asa vita sy ny asam-pampandrosoana manaraka kasain’ izy ireo. Tanjona ny handrindrana ny fampandrosoana ataony sy ny an’ny fanjakana foibe. Nambaran’ny minisiitra fa tsy maintsy jerena ny fiantraikan’ny fitrandrahana any amin’ny vahoaka sy ny fampandrosoana eny ifotony.